Kantiibaa magaalaa Amboo: 'Qaamolee nageenyaa keessaa kan to'annoo jala oolan jiru' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Ashabbiir
Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Tafarraa Badhaadhaa rakkoo magaalittii keessatti mudatee tureen badii lubbuuf qaamolee sababa ta'an kamuu seeratti dhiyeessinaa jedhan.
Guyyoota lama darban magaalaalee Oromiyaa hiriirri mormii keessatti gaggeefamanii lubbuun namoota baayyee itti darbe keessaa magaalaan Amboo tokko.
Hiriira mormii tibbanaan lakkoofsi namoota du'anii 67 gahe
Daandii konkolaataa cufuun mormii karaa nagaa gaggeefamaa ture dhukaasa qaamoleen nageenya mootummaa bananiin guyyoota lama keessatti maanguddoo magaalichatti kabajamoodha jedhaman dabalatee lubbuun namoota 6 darbuu maddeen hoospitaalaa BBC'tti himaniiru.
Maanguddoon magaalittii ganna 80 Obbo Morodaa Moossaa hiriira guyyaa lammataaf magaalittii keessatti gaggeefame wajjiin walqabatee qoricha bitachuuf bahanii guyyaa naannoo sa'aa torbaatti rasaasaan ajjeefamuu maatiin isaanii himaniiru.
''Abbaan koo qoricha kilinika pooliitii bitachuuf bahee tokko bitatee kan biraa ammo Hospitaala Ambootii bitachuuf bahee achii yeroo deebi'u naannoo qilxuu jedhamutti rasaasaan rukutamanii,'' jedha ilmisaanii Ulfinawaaq Morodaa.
Dudduuba mataa isaaniirra rukutamuufi Hospitaala Amboo erga gahanii booda lubbuun isaanii darbuus nutti hime.
''Rasaasa mataa isaanii lixe keessaa baasuun danda'amuus miidhaa irra gaherraa kan ka'e lubbuu isaanii oolchuun hin danda'mne.'' .
Abbaa hiyyeessaa turan
''Abbaa hiyyeessaa Oromoon akka doofaa ta'u kan hin barbaannee ture, nama ormaaf osoo jiraatuu wareegameedha.''
Jalala namaafi fooyya'uu namaaf qaban irraa kan ka'e ijoollee ormaa naannoo garaa garaarraa fidan 83 ta'an guddisanii milkii isaaniis arguu danda'aniiru nuun jedhe ilmi isaanii kun.
Afaan Oromoofi Oromuummaaf quuqama qaban irraa kan ka'e mana barnootaa oolmaa daa'immaniifi sadarkaa tokkoffaa ''Hundee Guddinaa'' jedhamu magaala Ambootti bananiiru.
Hedduun daa'imman kanaa kan maatii harka qalleeyyii waan ta'aniif bilisaan ykn kaffaltii xiqqaan akka baratan gochaa turaniis nuun jedhe.
Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Daalleettis mana barumsaa 'Morodaa Moossaa' jedhamu ganda baadiyyaa bakka dhalootaa isaniittis mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa hundeessaniiru.
''Qaamolee badii kana geessisan seeeratti dhiyeessina''
Jiraattootni magaalaa Amboo dubbifne ajjeechaa kan raawwate Poolisiidha jechuun komataniiru.
''Yeroo Kanaan dura dubbiin kanarra hammaataa turettillee ummataaf of eeggataa turee, amma ummatatti dhukaasee ajjeesuutti gaddineerraa'' jechuun BBC'tti himaniiru.
'Adaamaatti lakkoofsi namoota ajjeefamanii 16 qaqqabeera '
Kantiibaan Magaalaa Amboo Obbo Tarrafaa Badhaadhaa guyyoota lamaan darban ''gonkumaa waan fudhatama hin qabneefi dogoggora ta'etu raawwatee'' jedhanii, ''namni lubbuu balleessee fi badii gaheef sababa ta'aniifi dubbicha babal'ise kamuu seeratti ni dhiyaataa jedhaniiru.
''Kan lubbuu baasee qaama barbaade haata'u, maqaa barbaade haa qabatu qaama nageenya hin barbaannee akka ta'e beekamuu qaba.''
Qaamoleen nageenyaa to'annoo jala oolaan jiraachuu kan himan Kantiibaa Taffarraan lakkoofsa isaanii fi badiin dalagan qulqullaa'ee qaama dhimmi ilaallatuun ifa ta'aa jedhan.
Dr Abiy Ahimed: Magaalaa Ambootti MM ''Isin akka mixii malee akka Kuruphisaa hin tahiinaa,'' jechuun barattotaaf ergaa dabarsan
24 Muddee 2018
Tajaajilli 4G Itiyoo-Telekom baballisaan jira jedhu maalidhaa?
Daa’ima hammatanii of cinaa raffisuumoo kophaa raffisuutu gorfama?
Daqiiqaa 42 dura
Waldhabdeen Israa'el fi Paalistaayin waggoota 100 akkamiin eegale?
'Telebirr' - tajaajila mobaayila harkaa qaban baankii xiqqaa taasisu
'Qaama nama ajjeesurratti tarkaanfii walgitu fudhachuuf kallatiin kaa'ameera'
Yeroo dhuma kan haaromfame: 21 Muddee 2018
Qondaaltonni Hamaas ajjeefamuu hordofuun Israa’eel rookkeettiin tumamaa jirti
Ayyaanni Iid al-Faxir Finfinneetti dhaadannoo 'Hidhichi kooti' jedhuun ho'e
Guyyaa filannoo irratti jijjiiramni ta'uu malaa laata?